सल्यानमा विद्युत जडानको लागि नयाँ मिटर बक्स अभाव « Salyan Today
सल्यानमा विद्युत जडानको लागि नयाँ मिटर बक्स अभाव
आवेदन दिएको झण्डै आठ महिना बढी हुदाँ समेत मिटर बक्स पाउन नसकेको नागरिकको गुनासो
प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७८, शुक्रबार
सल्यान २०, फागुन ।
सल्यानमा विद्युत जडानको लागि नयाँ मिटर बक्सको अभाव भएको छ । जिल्लाभर विद्युत बिस्तारको लागि पोल गाड्ने, तार तान्ने लगाएतका काम भैसके पनि जिल्लामा मिटर बक्स अभाव हुदाँ नागरिकहरु बिजुली बाल्नबाट बञ्चित भएका छन् । विद्युत कार्यालयमा नयाँ मिटरको लागि आवेदन दिएको झण्डै आठ महिना बढी हुदाँ समेत मिटर बक्स पाउन नसकेको नागरिकको गुनासो रहेको छ ।
गाउँमा विद्युतको पोल र तार तान्दा बिजुली बाल्ने आसामा खुसी भएका नागरिकहरु अहिले निरास बनेका छन् । सिद्धकुमाख गाउँपालिका निवासी रुपक चलाउनेले विद्युतको नयाँ मिटर बक्सको लागि आवेदन दिएको झण्डै ८ महिना हुदाँ समेत मिटर बक्स नपाएको गुणासो गर्नुभयो । ‘बत्ती नहुदाँ समस्या भएको थियो, लामो समय पछि गाउँमा पोल गाडेर तार तानिएको छ, तर मिटर बक्स नहुदाँ बाल्न पाएका छैनौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।
तत्कालै बिजुली बत्ती बाल्ने आसमा बसेका जिल्लाका केही नागरिकले घर वायरिङ समेत गरेको जनाएका छन् । तर मिटर बक्स नपाउदाँ बिजुली बत्ती बाल्न नपाएको उनीहरुको भनाई छ । नेपाल विद्युत प्राविधिकरण सल्यान वितरण केन्द्रका सुचना अधिकारी मदन भण्डारीले नयाँ मिटर बक्सका लागि आवेदन दिएका करिब ७ सय उपभोक्ताले नयाँ मिटर नपाएको बताउनुभएको छ ।
जिल्लामा मिटर बक्सको अभाव हुदाँ गत साउन महिना देखी नयाँ मिटर वितरण गर्न नसकिएको उहाँको भनाई छ । ‘हामीले ग्राहकहरुको कम मात्रामा आवेदन लिएका छौँ, तर नयाँ मिटरको माग धेरै नै छ, हामी सँग छैन्’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले देशभरी नै नयाँ मिटर बक्सको अभाव भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्युत विस्तारसँगै जिल्लाका ग्रामिण भेगबाट विद्युत् जडान गर्नेका लागि निवेदन दिने ग्राहकहरुको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको छ ।
‘यस पटक मिटर बक्स खरिद गर्न ढिलाइ हुदाँ नयाँ मिटरको देशैभर अभाव छ, हामी कहाँ भर्खर मात्रै २ सय मिटर बक्स आएको छ, तर ७ सय भन्दा बढी आवेदन नै छन्, हामीले त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्दैन्, थप मिटर बक्स माग गरेका छौँ, ती मिटर बक्स जिल्लामा आइपुगेपछि मात्रै वितरण गर्छौ’ उहाँले भन्नुभयो ‘माग धेरै छ, थोरै मिटर हुदाँ कसलाई दिने ? कसलाई नदिने ? समस्या भयो ।’
कार्यालयका अनुसार सल्यान वितरण केन्द्रबाट मिटर बक्स लिएर जडान गरेका जिल्लाभर १६ हजार ७ सय १९ ग्राहक रहेका छन् । बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिकालाई सुर्खेत वितरण केन्द्रले हेर्ने भएकाले जिल्लाभरको आधिकारिक तथ्यांक आउन नसकेको जनाइएको छ । जिल्लामा विद्युत् विस्तारका लागि स्थानिय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले बर्षेनी करोडौँ रुपैँया विनियोजन गर्दै आएका छन् ।